Waa sidee saaka xaaladda degmada Guriceel? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa sidee saaka xaaladda degmada Guriceel?
Guriceel ayaa saakay haawaneysa, mana jiraan wax dagaal ah oo degmada ka socda, hayeeshee, dirirta ayaa ah mid xilli walba bilaaban karta, maadaama aysan jirin wax waan waan ah oo laga dhex wado dhinacyadii ku dagaalamaya degmadaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaalad degganaan ah oo aan caga badan ku taagneyn ayaa saakay laga soo werinayaa magaalada guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo maalimihii ugu danbeeyey ay ku dagaallamayeen koox hubeysan oo taabacsan hoggaanka Ahlu Sunna iyo Ciidanka Xoogga Dalka oo garab ka helaya ciidamo ka tirsan kuwa amniga Maamulka Galmudug.
Waxaa weli degmada ka muuqda raadadka collaadii 3-dii maalin ee la soo dhaafay ka socotay Guriceel, iyadoo xilli walba ay marxaladdu is badali karto, maadaama ilaa iminka aysan jirin cid dhinacyada ka dhex wada waan waan loogu kala dabqaadayo.
Baaqyo kala duwan ayaa ka soo yeeraya waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, kuwaasoo ku baaqaya in xiisadda jirta is af-garad lagu dhameeyo, waxana baaqii ugu danbeeyey jeediyey Midawga Musharaxiinta Sooomaaliyeed, oo la sheegay in qudhoodu aysan isku aragti ka ahayn xaaladda Guriceel.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Keydmedia Online u sheegay in inta badan degmada Guriceel ay gacanta ku hayaan CXD, waxana kooxda Ahlu Sunna ay fariisimo cusub ka sameysteen waqooyi-bari degmadaasi, oo ah halka uu shalay ka dhacay dagaalkii labada dhinac ay isaga hor yimaadeen.
Qoorqoor ayaa hoggaanka Villa Soomaaliya ka dalbaday ciidamo dheeri ah, kuwaasoo shalay galinkii danbe gaaray Magaalada Dhuusamareeb, waxana baraha bulshada lagu faafiyey sawiradooda, taasoo dadka qaar ay ku fasireen fariin ku socota Ahlu Sunna oo iyaga dhankooda uu kooban yahay gurmadkooda.
Dagaalka Guriceel ayaa dhaliyey khasaare kala duwan, waxana ilaa iyo iminka inta la xaqiijiyey ay dhimashadu ku dhawdahay 50 ruux, halka dhaawucun uu ka badan yahay 100 qofood, waxana banaanka degmada barakac ku ah qoysaskii degganaa Guriceel.